လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao | CURACAO တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူပါ၊ CURACAO တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်၊ CURACAO တွင်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ရယူပါ။ CURACAO တွင်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူမည်၊ CURACAO တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်၊
Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင် - Curacao မှလောင်းကစားလိုင်စင်ရယူပါ။
Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုသင်လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ Curacao`s လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်နိုင်သောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်သည်။
●လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ရယူပါ။
●လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ကိုရယူပါ။
●လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်လျှောက်လွှာ။
●လောင်းကစားလိုင်စင်ကြေး Curacao ။
● Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ရယူခြင်း။
●လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ။
●လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ။
●လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူခြင်း၊ Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း၊ Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူခြင်း၊ Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရရှိခြင်းအားဖြင့် Curacao အတွက်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကူအညီကိုပေးသည်, Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူရာတွင်ကူညီသည် Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့၊ Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အကြံပေးများ၊ Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ရှေ့နေများ၏အကူအညီဖြင့် Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့် Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူလောင်းကစားလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးပါတယ် Curacao အတွက် Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအဝင် Curacao များအတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အခကြေးငွေ။
Curacao အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူ Curacao ၏လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Curacao ၏လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၁၀၀% အောင်မြင်ရန်ဖြစ်သည်။
လောင်းကစားလိုင်စင်ပေး Curacao အတွက်နိဒါန်း
Curacao သည်စီမံခန့်ခွဲထားသော eGaming ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ရှေးအကျဆုံးနှင့်နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်ဆုံးပေးသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Curacao သည် ABC ကျွန်းများ၏အကြီးဆုံးကျွန်း (Aruba, Bonaire နှင့် Curacao) သည်ဗင်နီဇွဲလား၏ကမ်းစပ်နားတွင်သာတည်ရှိသည်။ Curacao သည်အရှည် ၃၈ မိုင်၊ အကျဆုံးအကျဆုံး ၇ မိုင်နှင့်အအကျဆုံးအကျဆုံး ၂.၁ / ၂ မိုင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်း၏အနောက်ဘက်ခြမ်းပေ ၁,၂၆၀ ပေနှင့်အရှေ့ဘက်အဆုံးနှင့်ပေ ၆၀၀ ခန့်တွင်ရှိသော Tafelberg တွင် Sint Christoffelberg သည်ထင်ရှားသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပေါ်လွင်ချက်များဖြစ်သည်။ Tafelberg သည်ထုံးကျောက်ထုံးတမ်းစဉ်လာအားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအချိန်အတော်ကြာပေးခဲ့ပြီးယခုတွင်မူကုန်းမြင့်မြင့်နှင့်တူသည်။ ကျွန်း၏တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အသံအနည်းငယ်နှင့်ကြီးမားသောအသံများထွက်ပေါ်လာသည်။ Schottegat ဟုလူသိများသည့်အတွင်းပိုင်းဆိပ်ကမ်းပါ ၀ င်သည့်အကြီးမားဆုံးသောအရာများမှာ Willemstad မြို့ဝန်းရံထားသည်။ Curacao နှင့်အခြား ABC ကျွန်းများသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပူသည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းအပူချိန် ၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက်ပိုများသည်။ ညနေခင်းတွင် ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောက်သို့ကျသည်။ ဆွေမျိုး mugginess အလယ်အလတ် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိပြီးပုံမှန်နှင့်ဝေးကွာသောနေရာနှင့်ဤတွင်သာရှိသည်။ သို့ရာတွင်နွေးထွေးမှုနှင့်စိုထိုင်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလက်တွေ့ကျကျတသမတ်တည်းဖြစ်သောအရှေ့ပိုင်းကုန်သွယ်ရေးလေများကလျှော့ချထားသည်။ ပင်လယ်အပူချိန်သည် ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီးနွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအကြားဒီဂရီအနည်းငယ်ကိုသာပြောင်းလဲသည်။ နှစ်စဉ် ၂၂ လက်မသာရွာသွန်းသောမိုးရွာသွန်းမှုများရှိပြီးအများစုမှာနို ၀ င်ဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာလများအတွင်းကျရောက်ပြီးကျွန်းများသည်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းခါးပတ်အောက်တွင်ရှိနေပြီးတိကျသောစွန့်စားမှုများပျောက်ဆုံးနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်လုံခြုံသောအပင်များ၊ သဲကန္တာရများ၊ ဆူးပင်များနှင့်အရည်ရွှမ်းများရှိသည်။ သြဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာနှင့်အောက်တိုဘာလများသည်အပူဆုံးလများ၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ဇန်နဝါရီနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလများသည်အအေးဆုံးဖြစ်သည်။ Curacao နှင့်အခြား ABC ကျွန်းများသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပူသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအပူချိန်သည်တစ်နေ့လျှင် ၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက်သာလွန်သည်သို့မဟုတ်ညနေခင်းတွင် ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောက်သာကျသည်။ ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆသည်နှစ်စဉ် ၇၀% အလယ်အလတ်ရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်နှင့်ဝေးကွာသည်။ အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းမှု၏သက်ရောက်မှုကိုမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုလက်တွေ့ကျကျတသမတ်တည်းဖြစ်သောအရှေ့ပိုင်းကုန်သွယ်ရေးလေများကလျှော့ချထားသည်။ ပင်လယ်အပူချိန်သည် ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီးနွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအကြားဒီဂရီအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ၂၂ လက်မသာရွာသွန်းနိုင်ပြီးအများစုမှာနို ၀ င်ဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာလများတွင်ကာလကြာရှည်စွာရွာသွန်းပြီးကျွန်းများသည်မုန်တိုင်းခါးပတ်အောက်တွင်ရှိနေပြီးတိကျသောဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်လုံခြုံသောအပင်များ၊ သဲကန္တာရများ၊ ဆူးပင်များနှင့်အရည်ရွှမ်းများရှိသည်။ သြဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာနှင့်အောက်တိုဘာလများသည်အပူဆုံးလများ၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ဇန်နဝါရီနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလများသည်အအေးဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်းသည်အနောက်အင်ဒီးစ်၏အကောင်းဆုံးဘုံဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတို့အားအထူးနှစ်သက်ဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်း၏အရှေ့တောင်ဘက်အစွန်ပိုင်းတွင်စဉ်အန္နဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သည်ကြီးမားသော၊ လေးနက်။ လက်တွေ့ကျကျဖုံးကွယ်ထားသောဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းတန်းရှိမြို့တော်ဝီလ်လတ်စတ်၏နေရာဖြစ်သော Schottegat သို့သွားသည်။ Herring အားကာကွယ်ရန်ဆားအတွက်လိုအပ်ချက်ကဒတ်ခ်ျလူမျိုးများကိုကာရေဘီယန်သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ၁၆၆၀ မှ ၁၇၀၀ အတွင်းဒတ်ခ်ျအနောက်အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကြီးထွားလာသည်။ ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးပေါက်ကွဲမှုနှင့်Curaçaoဆိပ်ကမ်းသည်ချဉ်းကပ်စားသောက်ကုန်များရရန်နှင့်တောင်အမေရိက၏မွေးမြူရေးခြံမှပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရန်နှစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုကျွန်းသည်ပြိုင်ဘက်ပုဂ္ဂလိကများထံမှတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်နှင့်ဒတ်ခ်ျတို့အကြားတိုက်ပွဲများအတွင်းခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သည်။
ပြည်နယ်၏အကြီးအကဲမှာဒတ်ခ်ျအုပ်စိုးရှင်ဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ကပြောခဲ့သည်။ အစိုးရခေါင်းဆောင်မှာ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ကစီမံခန့်ခွဲသော ၀ န်ကြီးအဖွဲ့များသည်အစိုးရ၏မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်သည်။ Curaçaoမှဓမ္မဆရာသံတမန်သည်နယ်သာလန်တွင်နေထိုင်ပြီးနယ်သာလန် ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင်ထိုနိုင်ငံအားပြောကြားခဲ့သည်။ Curaçaoတွင်တစ်ပါတီပါလီမန် (Staten) ရှိပြီးလူ ၂၁ ဦး ကိုဆွေမျိုးပုံဖော်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ၅ နှစ်ခန့်သက်တမ်းရှိသည်။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်တွင်မဆိုအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိဒတ်ခ်ျလူမျိုးများနှင့်အတူကူဒါရိုမြို့ရှိနေထိုင်သူများအားလုံးအတွက်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။ Curaçaoသည်အတွင်းပိုင်းကိစ္စများတွင်လွတ်လပ်သည်၊ သို့သော်နယ်သာလန်၏အများပြည်သူဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာသည်အကာအကွယ်၊ မရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြissuesနာများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ တရားရေးအမှုဆောင်မှာပထမ ဦး ဆုံးတရားရုံးနှင့် Aruba၊ Curaçao၊ Sint Maarten နှင့် Bonaire၊ Sint Eustatius နှင့် Saba တရားမျှတသောတရားစီရင်ရေးတရားရုံးတို့ပါဝင်သည်။ တရားရုံး (၂) ခုသည်ဘုံနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကိုဆောင်ရွက်သည်။ နယ်သာလန်၏တရားရုံးချုပ်သည်နောက်ဆုံးအယူခံဝင်သည့်တရားရုံးဖြစ်သည်။ ကူရာချို၏စီးပွားရေးသည်ဗင်နီဇွဲလားမှတင်သွင်းသောမသန့်စင်သောရေနံများကို အသုံးပြု၍ ရေနံသန့်စင်ခြင်းအပေါ်များစွာမှီခိုသည်။ ဆိပ်ကမ်းသည်ကြီးမားသောခရီးသည်ကြီးများကိုတာ ၀ န်ယူနိုင်ပြီးကျွန်းသည်ပနားမားတူးမြောင်းကိုဖြတ်သန်းသွားသောကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏လမ်းဆုံတွင်တည်ရှိသည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ Maracaibo ရေကန်တွင်ဒတ်ခ်ျတို့သည်ရေနံရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းကြောင့်ရေကန်သည်သမုဒ္ဒရာလှိုင်းများအလွန်များပြားသောကြောင့်ရေနံသန့်စင်ခြင်းနှင့်ချောထုပ်ခြင်းအတွက်ပိုမိုကျိုးနွံသောရေယာဉ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Curaçaoသည်လက်ရှိခြောက်သွေ့သောသင်္ဘောကျင်းကြီးများနှင့် Bunkering ရုံးကြီးများကြီးထွားလာပြီးအလေးချိန်အားလုံးဂရုစိုက်သရွေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်အခမဲ့အတိုင်ပင်ခံ၊ လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ရယူပါ၊ လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ရယူပါ၊ လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao လျှောက်ထားပါ။ လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao လျှောက်ထားပါ၊ လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အွန်လိုင်းကစားခွင့်လိုင်စင် Curacao ကိုရယူပါ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် Curacao လျှောက်ထားပါ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် Curacao အတွက်လျှောက်လွှာ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် Curacao လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် Curacao ကုန်ကျစရိတ်၊ ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao လျှောက်ထား၊ Curacao ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူ, ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူ , ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao လျှောက်ထား, ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao လျှောက်လွှာ, ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ကုန်ကျစရိတ်, လောင်းကစားရုံလိုင်စင် Curacao, ကာစီနိုလိုင်စင် Curacao ရယူ, ကာစီနိုလိုင်စင် Curacao ရယူ, ကာစီနိုလိုင်စင်လျှောက်ထား Curacao, လောင်းကစားရုံအတွက်လျှောက်လွှာ လိုင်စင် Curacao, CAS များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ino လိုင်စင် Curacao, လောင်းကစားရုံလိုင်စင် Curacao ၏ကုန်ကျစရိတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အကြံပေးအဖွဲ့သည်သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန် Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အခမဲ့အကြံပေးသည်။
Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်ကိုမလျှောက်မှီသေချာစွာလုံ့လဝီရိယရှိခြင်း၊ KYC နှင့်သင့်လျော်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ခြင်း။
လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရယူခြင်းလိုင်စင်: 2-4 ရက်သတ္တပတ်
E-Zone သည်Curaçaoတွင်တည်ရှိပြီး၊ အခြားကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအထောက်အပံ့ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်အထောက်အပံ့များမှတစ်ဆင့်ပေးနိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင်ဤကုမ္ပဏီများ၏လှုပ်ရှားမှုများသည်ကုန်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးကိုအာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ Curaçao၏နေထိုင်သူများမဟုတ်သောသူများအားကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ပေးသောငွေကြေးလည်ပတ်မှုသည် Curacao တွင်နေထိုင်သူများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည်ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏လည်ပတ်မှု၏ ၂၅% ထက်မကျော်စေရ။ လုပ်ငန်းသည်Curaçaoနိုင်ငံသားများနှင့်ပြုလုပ်ပြီးကော်ပိုရေးရှင်းသည်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံလျှောက်လွှာတင်ရမည်။ ကုမ္ပဏီသည်အတည်ပြုချက်ကိုခွင့်ပြုလျှင်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်သောအခြေအနေများကိုရရှိနိုင်သည်။
E-Zone သို့လက်ခံရန်အတွက်ဒေသခံအာဏာပိုင်များထံတင်ပြသင့်သည်။ E-zone အခြေအနေလျှောက်ထားရန်ကုမ္ပဏီကို E-zone တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့ကိစ္စများတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူရုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆာဗာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေကိုအမြဲတမ်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် E-Zone အဆောက်အအုံတို့ကအာမခံရမည်။ OECD အရ၊ ဆာဗာသည်Curaçaoတွင်တည်ရှိပြီးအမြဲတမ်းတည်ထောင်ခြင်းကိုဖန်တီးသည်။
Local ဒေတာစင်တာသည်ဆာဗာတစ်လုံး ၀ ယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုးအမြတ်ကိုအပြီးသတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအခွန်အာဏာပိုင်များထံပြသရန် (တောင်းဆိုခြင်း)၊
အစုရှယ်ယာများခွဲဝေထားသောအရင်းအနှီးရှိသောတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများသာ E-Zone တွင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
မူဘောင်များအရလှုပ်ရှားမှုများသည်ကုရ်အာန်အပြင်ဘက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်း ၀ န်ဆောင်မှုများရောင်းဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရမည်။
တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကူရာကို၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုရမည်၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊
ကုမ္ပဏီများအကြားဆက်သွယ်မှုပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လွှဲပြောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်မှုသည်လွှဲပြောင်းစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ OECD ၏လမ်းညွှန်ချက်များကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်စွာသဘောတူညီထားသောနည်းလမ်းများနှင့်များစွာကွာခြားမှုမရှိပါ။
လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ကိုဘာကြောင့်လိုင်စင်ချပေးတာလဲ။
Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်၊ Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်၊ Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်နှင့် Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်ရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းသည့်အခါသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန်အတွက် Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးသားသောအားထုတ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားကိုးနိုင်သည်။ “ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာငါတို့ထက်ငွေရေးကြေးရေးထက်ပိုအရေးကြီးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဆက်ဆံရေးကိုရတယ်၊ ငွေကအလိုအလျောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ငါတို့အားလုံး ၀ င်ငွေရမယ်။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့ငါတို့ဖောက်သည်တွေကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ။ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Curacao`s လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ကိုရှာဖွေနေသောကုမ္ပဏီ ၁ ခုကိုရွေးချယ်စေသည်။
Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Curacao`s လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ကိုရှာဖွေနေသောကုမ္ပဏီ ၁ ခုကိုရွေးချယ်စေသည်။
ကျနော်တို့ Curacao အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးလောင်းကစားလိုင်စင်န်ဆောင်မှု, Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ, Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ, Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်၏စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်, Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်စျေးအပေါဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများပေး Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးအကြံပေးများ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်စျေးအပေါဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးသောအတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်စျေးအပေါဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ, Curacao လောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ Curacao တွင် Curacao ရှိကာစီနိုလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးရှေ့နေများ။
သိရန်လိုအပ် - Curacao ၏လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ထူးခြားချက်များနှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ
အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာရှင် ၂ ဦး (တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ နိုင်ငံသားကန့်သတ်ချက်သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ) [နောက်ပိုင်းတွင်အသင်း ၀ င်အကျိုးစီးပွားများကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားတရားဝင်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်]
ဒါရိုက်တာတစ် ဦး တည်းသာ (သာမန်လူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ)
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - အများပြည်သူမှတ်တမ်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်
ဒါရိုက်တာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - အများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်တမ်း
Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်စုစုပေါင်းအလောင်းအစားအပေါ် ၀.၀% အခွန်
Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်သည်နှစ်စဉ်လိုက်နာမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော e-Zone ကုမ္ပဏီများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန် ၂% ရှိသည်
လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် VAT၊ အရောင်းအခွန်သို့မဟုတ်သွင်းကုန်ခများမရှိပါ
စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များ - အခြေခံအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသင့်သည်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး - ဆာဗာများသည် Curacao EZone တွင်တည်ရှိသင့်သည်
ဒေသခံဝန်ထမ်းများ - မလိုအပ်ပါ
လိုင်စင်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများမှ ၀ န်ထမ်းများအားတာ ၀ န်ပေးအပ်သည့်ရှေ့နေအဖွဲ့၏မူကြမ်းကိုရေးဆွဲခြင်း
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏လက်မှတ်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုပေးပို့ပြီးဖောက်သည်နေထိုင်နေသောတိုင်းပြည်တွင်တရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရရန်
ထိုအကြောင်းပြချက်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးပါ။
နေထိုင်ခွင့်လိပ်စာအထောက်အထားမိတ္တူ (၃ လထက်မပိုသောအသုံး ၀ င်ငွေခွန်)
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်ပိုင်ရှင်၏တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (“ UBO”)
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကိုယ်စားမူရင်းပညာရှင်ရည်ညွှန်းစာ
UBO (များ) ၏အဓိကနေအိမ်တည်နေရာကိုစစ်ဆေးသောအသုံးအဆောင်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်း / စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ။
UBO (များ) ၏တစ် ဦး ချင်းစီကစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လျော်ကြေးငွေသဘောတူညီချက်အားသင့်လျော်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော client လျှောက်လွှာပုံစံ
UBO (များ) တစ်ခုချင်းစီ၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်ကို
အကယ်၍ ဒေတာသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင်မဟုတ်ပါကသူတို့အား notary ဖြင့်ဘာသာပြန်ပေးရမည်။
ကျေးဇူးပြု၍ notarization ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သေချာအောင်စစ်ဆေးပါက notarized English translation ကိုပေးပါ။
လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao တွင်လိုင်စင်ချထားခြင်းအတွက်ငြင်းဆိုခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ငွေကြေးခဝါချခြင်း၊ လောင်းကစားလိုင်စင်မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှု၊ ကူရာကေးလောင်းကစားလိုင်စင်တွင်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်လူကုန်ကူးခြင်းများကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်တင်းကြပ်စွာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ Curacao တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူပါ.
Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်ထား Curacao နှင့်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဥပဒေအရအောက်မှာနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားတဲ့တရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ် Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် လောင်းကစားလိုင်စင်ဆည်းပူး Curacao ဘို့။
Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore လောင်းကစားလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကို Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံခြင်း။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကူရာကေးအိုတွင်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျအတွက်တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားရှေ့ဆောင်များ၊ ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Curacao`s ဖြည့်ချင်တယ် လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ကူရာကေးရှိလောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ Curacao ၏လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး Curacao`s လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်ထား.
Curacao ရှိလောင်းကစားအတွက်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိကြပါ။ Curacao`s လောင်းကစားလိုင်စင်လေးလည်း.
Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးအမျိုးအစားများအားလည်းထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကို Curacao အားကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ရယူပါ.
Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ Curacao မှာငါတို့အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် Curacao မှာသုံးပါ။
အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကိုဆည်းပူး Curacao ဘို့။
Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည် Genetic ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုသည်။
Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကို Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူလိုသူများ၊ အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ offshore online gaming လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မဟုတ်ပါ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် Curacao တွင်ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှကူရာကို့ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Curacao`s ဖြည့်ချင်တယ် အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ကူရာကေးရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါ။ Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်လျှောက်ထားပါ.
Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလည်းထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းများကို Curacao အားကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူပါ.
Curacao ၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ Curacao နှင့်ငါတို့ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao တွင်သုံးသည်။
ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ Curacao သည်တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဥပဒေအရအောက်တွင်နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် (များ) အား Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခြင်းလိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ Curacao ဘို့။
Curacao ၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကို Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူလို။ အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူများအား Curacao သို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao အတွက်လည်းမဟုတ်ပါ ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao တွင်ကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကူရာရာကိုရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုရာကူရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Curacao`s ဖြည့်ချင်တယ် ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Curacao ၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး Curacao ၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းတို့သည် Curacao ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလည်းထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ Curacao မှာလောင်းကစားရုံလိုင်စင်ရယူပါ.
ကာရာကာအိုလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ လောင်းကစားရုံလိုင်စင်လျှောက်ထား Curacao မှာငါတို့ကာစီနိုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကာစီနိုလိုင်စင် Curacao မှာသုံးပါ။
ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ကူရာကေးရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအောက်တွင်နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ဆည်းပူး Curacao ဘို့။
Curacao ၏လောင်းကစားလောင်းခွင့်လိုင်စင်အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည် Genetic ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Curacao တွင်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုသည်။
Curacao ရှိကာစီနိုလိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore လောင်းကစားရုံလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကို Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားရုံလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ လောင်းကစားရုံလိုင်စင် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံခြင်း။
Curacao ရှိကာစီနိုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည် Curacao ရှိလောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကပေးအပ်သည်၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Curacao`s ဖြည့်ချင်တယ် လောင်းကစားရုံလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ကူရာကေးရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ Curacao ၏လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ကာရာကာအိုရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါ။ Curacao ၏လောင်းကစားရုံလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ.
Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်သလို၊ Curacao ၏လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် Curacao တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူရန်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာဝန် (များ) ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီထို site အသုံးပြုသူများအားသင့်တော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် လောင်းကစားလိုင်စင် Curacao ။
Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်လျှောက်ထားသောအခါ၊ Curacao တွင်လိုင်စင်ဖြင့်စတင်သော်လည်းကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့ကိုပေးသော်လည်း Curacao တွင် HR အထောက်အပံ့ကိုတိုးချဲ့သည်။
Curacao ရှိအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ Curacao ရှိအွန်လိုင်းကစားခွင့်လိုင်စင်၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ, Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ, Curacao၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ Curacao တွင်အကောင်းဆုံးလောင်းကစားရုံလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊
Curacao အတွက်လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာ!
ငါတို့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Curacao နှင့် 108 နိုင်ငံများအဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများသည်လည်းကူညီနိုင်သည် ဘဏ်အကောင့် Curacao နှင့် 108 နိုင်ငံများတွင်ဖွင့်လှစ်။
Curacao အတွက်လိုင်စင်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်လမ်းညွှန်မှုကိုလည်းပေးသည် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ.
VoIP ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည် ဖုန်းနံပါတ် Curacao နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များအားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်အတန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။
လိုအပ်ပါတယ် ရောင်းရန်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Curacao ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရကိုယ်စားလှယ်များသည် Curacao ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် သင်၏လောင်းကစားလိုင်စင်ပြီးနောက် Curacao ရှိအတိုင်ပင်ခံများသည်အထူးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
လောင်းကစားလိုင်စင်အပြင်ငါတို့၏ဖောက်သည်များကိုပြည့်စုံသောအကူအညီဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ခြင်း Curacao ၌တည်၏။
အကောင်းဆုံး Curacao အတွက်စာရင်းကိုင် Curacao အတွက်မည်သည့်စာရင်းကိုင်အထောက်အပံ့အတွက်မဆို 24 *7ကိုရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံမှငွေစာရင်းများပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
များအတွက်အတန်းထောက်ခံမှုအတွက်အကောင်းဆုံး အဆင်သင့်ကုမ္ပဏီ Curacao နှင့် 109 နိုင်ငံများတွင်။
Curacao သို့စွန့် ဦး တီထွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
ကိုလိုက်ရှာသည် လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Curacao သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀၇ နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏သော့ချက်သော ၀ န်ထမ်းများအား Curacao တွင်နေရာချထားရန်နှင့်ထောက်ခံရန်လိုအပ်သည် အလုပ်ဗီဇာ ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းများအတွက် Curacao သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်စွာကူညီနိုင်ခဲ့သည် web development Curacao နှင့် blockchain, IOT, web, ecommerce နှင့် apps များကိုအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသောနိုင်ငံများရှိ ၁၀၉ နိုင်ငံ၌ရှိသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ - Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်
Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင် Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးခဲ့သည်။
Curacao အတွက်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူပါ Curacao တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်။ | Curacao တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ရယူပါ
အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်သည် Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါက Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရယူရန်အတွက် Curacao အတွက်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။
Curacao အတွက်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ရယူပါ Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ရယူပါ
Offshore လောင်းingလိုင်စင်သည် Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက Curacao ၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရရှိခြင်းတို့တွင် Curacao အတွက်ကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Curacao အတွက်ကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ရယူပါ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ
လောင်းကစားရုံလိုင်စင်သည် Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက Curacao လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရရှိခြင်းအတွက် Curacao အတွက်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Curacao အတွက်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ရယူပါ ကာရာကာအိုတွင်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ Curacao တွင်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ရယူပါ
Curacao ၏လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်။ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ , Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လည်းတတ်နိုင်အခကြေးငွေမှာ Curacao ၏လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
Curacao မှာအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ Curacao မှာအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်လည်းရတယ်။
Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ရရန်အတွက် Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများကိုသင်တတ်နိုင်သမျှကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကကူညီပေးနိုင်သည်။ , Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တတ်နိုင်သောအခကြေးငွေဖြင့် Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီပေးသည်။
သင်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကို Curacao တွင်ရယူပါ သင်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကို Curacao တွင်ရယူပါ
Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုလည်းလူသိများသော Curacao တွင်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိမည်နည်း။
Curacao ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ရရန်အတွက် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များနှင့် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ဆည်းလျှင်ကူညီနိုင်သည်။ , Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လည်းတတ်နိုင်အခကြေးငွေမှာ Curacao ၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
သင်၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကို Curacao တွင်ရယူပါ သင်၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကို Curacao တွင်ရယူပါ
Curacao မှလောင်းကစားရုံလိုင်စင်ရရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သည့်ကာစီနိုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့် Curacao ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်အား Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ Curacao ရှိလိုင်စင်နှင့် Curacao ၏ကာစီနိုလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
သင့်ရဲ့လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကို Curacao မှာရယူပါ သင်၏ကာစီနိုလိုင်စင်ကို Curacao တွင်ရယူပါ
Curacao ရှိသင်၏လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ Curacao ရှိသင်၏လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ
Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်သင်သည်ရူပဗေဒနှင့်ကိုက်ညီပြီးရိုးရှင်းသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်။ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည် Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်နှင့် Curacao ၏လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
Curacao အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်သင်ကူညီနိုင်သည့်အွန်လိုင်းကစားနည်းလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့် Curacao မှလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်နှင့် Curacao ၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်တတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ကို Curacao မှာရယူပါ Curacao တွင်ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ရယူခြင်း
Curacao တွင်ကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ကိုလည်းလူသိများသော Curacao တွင်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
Curacao ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များနှင့် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်ကူညီနိုင်လျှင် Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက်နှင့် Curacao ၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကမ်းလွန်လောင်းကစားခြင်းလိုင်စင်ကို Curacao တွင်ရယူပါ ငါ၏အကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ကို Curacao မှာရခဲ့တယ်
Curacao တွင်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ရယူခြင်းဟုလည်းသိကြသော Curacao တွင်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း။
Curacao လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သည့်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့် Curacao ရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည် Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Curacao ရှိကာစီနိုလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ လောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Curacao နှင့်သင်တတ်နိုင်သောအခကြေးငွေများမှာ Curacao ၏ကာစီနိုလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကို Curacao မှာရယူပါ ကျွန်တော့်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ကို Curacao မှာရပါတယ်
ငါ၏အလောင်းကစားလိုင်စင်ကို Curacao မှာရယူပါ ကျွန်တော့်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုကူရာကို့မှာရတယ်
Curacao ရှိ Curacao လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အဓိကကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထူးအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Curacao တွင်အွန်လိုင်းကစားခြင်းလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။ Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေလည်းဖြစ်သည်။
Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ခ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်ကြေး Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Curacao တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်ခ
Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေ။
Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ် | Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ကြေး Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်ခ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ် | Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်ခ
Curacao ရှိကာစီနိုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်သည် Curacao ရှိကာစီနိုလိုင်စင်အတွက်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များလဲ။
Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ကာရာကာအိုတွင်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်ခ Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်ကြေး Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်ခ
Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Curacao ရှိလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေများ
အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ - Curacao တွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း
ဒတ်ခ်ျဗဟိုဘဏ် - De Nederlandsche Bank (DNB)
ကာရေဘီယံနယ်သာလန် - DNB: ကြီးကြပ်မှုနှင့်အခန်းကဏ္။
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဘဏ် ၄၇၁ ခုအတွက် Curacao အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ
Curacao ရှိမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် Curacao ၏လိုအပ်ချက်များ၊ အခကြေးငွေများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကန ဦး အပ်ငွေစသည်ဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသည်။
Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် Curacao အတွက်ဘဏ်အကောင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Curacao ကိုစတင်ထောက်ပံ့သူများ၊ Curacao ရှိလူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
Curacao အတွက်အတွေ့အကြုံရှိသောဘဏ် ၀ န်ဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဖောက်သည်များအားဘဏ်စာရင်းပံ့ပိုးမှုပေးသော Curacao အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Curacao တွင်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းကို Curacao မှပေးပါသည်။
Curacao အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်ထောက်ပံ့မှုအဖွဲ့မှ Curacao တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်၏ထိပ်တန်းဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်းအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။
Curacao အတွက်ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကော်ရာရာအာတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သင့်အားသင်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Curacao အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်ဘဏ် ၄၇၂ ခုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအထောက်အပံ့များပေးလျက်ရှိသည်။
Curacao ရှိအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ, Curacao ရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ Curacao ရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်၊ Curacao တွင်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ Curacao၊ အွန်လိုင်းကစားနည်းလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းလွန်လောင်းကစားခြင်းလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံများ၊ Curacao ရှိအကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်၊ Curacao ရှိကမ်းလွန်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ အကောင်းဆုံး ca Curacao ရှိ sino လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Curacao ရှိကာစီနိုလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Curacao တွင်လောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ Curacao ရှိလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများလည်းဖြစ်သည်။
ကူရာကို့အတွက်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း - ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် Curacao ၏